Ngwongwo akụrụngwa, ihe nrụnye, ntinye sistemu mmiri mmiri - CIR-LOK
Tubing na hoses na-agbanwe agbanwe
Ihe atụ cylinder na ite condensate
Ihe nrịbama nrịbama mpaghara Flowmeter na syphon
Ngwa na ngwa ngwa
Ụlọ ọrụ ahụ etolitela ugbu a ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke na-emepụta, na-emepụta ma na-emepụta ọtụtụ puku ngwaahịa na ọrụ dị elu. Ndị otu nka achịkọtala ahụmịhe bara ụba na ụlọ ọrụ dị ka ike ọkụ, petrochemical, gas gas na ụlọ ọrụ semiconductor.
Ngwaahịa CIR-LOK niile nọ n'okpuru usoro njikwa mmesi obi ike siri ike site na usoro nhazi, imewe, nrụpụta, nnwale na asambodo iji hụ na emezuru ihe ndị ahịa chọrọ.
Na CIR-LOK, anyị na-agba mbọ maka afọ ojuju zuru oke nke ndị ahịa anyị. A ga-aza ajụjụ gị n'ime awa 24. Ndị otu anyị nwere ndị ọrụ maara ihe iji zaa ajụjụ gị ngwa ngwa. Ntinye ngwa ngwa bụ isi ihe na-eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma.
Ebumnuche CIR-LOK siri ike bụ guzobe onwe anyị dị ka onye isi ụlọ ọrụ wee gbasaa oke ahịa anyị. A na-edobe nke a na ngalaba ọ bụla n'ime nzukọ ahụ. Mgbalị anyị na-agba ga-echebe megide ịlanarị mmetụ aka nke na-eme ka azụmahịa anyị bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-aga nke ọma maka ndị niile metụtara ya.
Ngwá ọrụ Manifolds
Valves Enyemaka Kwesịrị Ekwesị
Ejima ferrule Tube akwa akwa
Ngwakọta ọkpọkọ akụrụngwa
Ngwa Weld Fittings
Ngwa igwe gasket ihu mkpuchi ihu
Ngwakọta Butt-Weld Obere
Valve n'okpuru osimiri
Valves nrụgide dị ala, ihe ndozi na tubing
Ultra High Pressure Valves, Ngwa na tubing
Valves nrụgide Ọkara, Ngwa na tubing
Ndị na-achịkwa nrụgide azụ
Ndị na-achịkwa Mbelata nrụgide
Onye na-ahụ maka nrụgide nrụgide okpukpu abụọ